रामाज्ञा चतुर्वेदी, मा. आशा चतुर्वेदीका तीन सन्तान मध्यका माइलो सन्तान हुन् डा अभिशेक चतुर्वेदी । ललितपूर स्थित रहेको आदर्श विद्या मन्दिरबाट माध्यमिक तह उतीर्ण गरेका उनले बिराला पब्लिक स्कुल, राजस्थानबाट उच्च माध्यमिक र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली (एम्स्) बाट एम.वि.वि.एस पूरा गरेका हुन् । अमेरीकाबाट न्यूरो सर्जरी सम्बन्धी स्पेशल ट्रेनिङ्ग लिएका उनी हाल नारायणी वयोधा अस्पतालना वरिष्ठ न्यूरो सर्जनका रुपमा कार्यरत छन् । मध्य नेपालले उनै बरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा. अभिषेक चतुर्वेदीसँग ब्रेन ट्यूमर रोगको बारेमा गरिएको विशेष कुराकानी :
१) ब्रेन ट्युमर भनेको के हो ?
ब्रने ट्यूमर भनेको एउटा ठूलो रोग हो । ब्रेन भित्र भएका कुनै पनि अंगबाट अनावश्यक मासु पलाउनु नै ब्रने ट्यूमर हो । ब्रेन ट्यूमरलाई हाम्रो समाजमा निकै भयावह रुपमा लिइन्छ । ब्रेन ट्यूमर एक गम्भिर समस्या हो ।
२) यसको कारण र लक्षणहरु के के हुन् ?
जन्म जात र केही वंशाणुगत बाहेक ब्रेन ट्यूमरको ठोस कारण चिकित्सा विज्ञानले पत्ता लगाइसेको छैन । त्यसैले यही कारणले गर्दा ब्रेन ट्यूमर हुन्छ भन्ने अवस्था छैन । यदि टाउको दुख्ने, वान्ता हुने, छारेरोग, शररीको कुनै अंग कमजोर हुने, आँखा कमजोर हुने जस्ता लक्षणहरु दखियो भने एक पटक सिटीस्क्यान वा एमआरआई गराउँनु पर्छ । लक्षणको आधारमा सिटीस्म्यान वा एमआरआइ गरी ब्रेन ट्युमर भए नभएको र यदि ब्रने ट्यूमर हो भने कुन ग्रेडमा छ त्यो जाँच गरिन्छ ।
३) ब्रेन ट्यूमरको कुन उमेर समूहकालाई बढी हुन्छ ?
यसको कुनै खास उमेर समुह छैन । यो बच्चा वयस्क वृद्ध जो कोहलिाई पनि हुन सक्छ तर प्रायः गरेर ४० वर्ष उमेर पार गरिसकेपछि भने ब्रेन ट्यूमरको खतरा बढी हुन्छ । पुरुषमा ब्रेन ट्यूमर हुनुको प्रमुख कारण भनेको फोक्सोबाट आउने क्यान्सर र महिलाहरुमा ब्रेनमा ट्यूमर हुनुको कारण भनेको स्तनको ट्यूमर । ब्रेनबाटै पलाउने ट्यूमर पनि हुन्छ ।
४) ब्रेन ट्यूमरलाई कति भागमा बाडिएको छ ?
ब्रेन भित्रबाटै आउने ट्यूमर पनि दुई वटा छन् । क्लयूमा र मेनिन्जियूमा
क्लयूमा भनेको दिमागको भित्र गिजाबाटै उत्पन्न हुने ट्यूमर हो ।
मेनिन्जियोमा दिमागलाई ढाक्ने झिल्ली(मेनिन्जेज) मा हुने ट्यूमर हो । यो पूरुषमाभन्दा पनि बढी महिलाहरुमा हुन्छ । सामान्यतया ब्रेन ट्यूमरलाई दुई भागमा बाँडिएको छ । बेनाइन र बेलिगनेन्ट ।
बेनाइन भनेको ट्यूमर हो । जुन ब्रेनमा छ । तर त्यो एउटा ट्यूमर मात्रै हो । बेलिगनेन्ट भनेको क्यानसर हो । ब्रेन हाम्रो अरु अंगभन्दा फरक छ । अरु अंगमा ट्यूमर भयो भने शरीरभरी फैलिन्छ । तर ब्रने भित्रबाटै ट्यूमर पलाएको छ भने त्यो बाहिर जादैन । त्यसैले ब्रेन ट्यूमरलाई बाहिर फैलिन्छ भन्न मिल्दैन । क्यान्सर भएको बिरामीहरुमा ब्रेन ट्यूमर एकदमै जटिल रुपमा ब्रेन भित्र पूरा फैलिन्छ । यसले गर्दा मस्तिष्कमा प्रेसर पर्छ र बिरामीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रदै जान्छ । क्यान्सर भएका बिरामीको जीवनकाल सामान्य ब्रेन ट्यूमर भएकाहरुको जस्तो हुदैन । ब्रेन क्यान्सरलाई पूर्ण रुपमा निकाल्न पनि सकिदैन । ट्यूमरलाई पनि केही जटिल अवस्थामा बाहेक पूरा निकाल्न सकिन्छ र यो पछि फर्किने सम्भावना एकदमै कम रहन्छ । तर क्यानर ब्रेनमा एकदमै जटिल रुपमा फैलिने भएकोले यसलाई यो सल्यक्रिया गर्न जटिल र तत् पश्चात पनि फर्केर आउँछ ।
ब्रेन क्यानसर पुष्टि भए पनि हामीले थप उपचार गराउनु पर्ने हुन्छ । जसलाई हामी रेडियो थेरापी (सेका) र किमो थेरापी भन्छौ । ट्यूमरको अवस्था हेरेर कुन दिने वा दुवै दिने भन्ने निक्र्यौल गरिन्छ । ब्रेन क्यान्सर भएका बिरामीहरुको जीवन काल पनि लामो हुँदैन । यदि कुनै पनि उपचार गरिएन भने उक्त बिरामीको आयु ६ महिनासम्मको हुन्छ । यदि उपचार गरेका छौ भने पनि बढीमा पनि डेढ वर्ष सम्म आयु बढाउन सकिन्छ
५) ब्रेन ट्यूमरको पनि स्टेज हुन्छ ?
अरु ट्यूमरमा जस्तो ब्रेन टेयूमरमा क्लासिफिकेसन गर्न सकिदैन । तर सामान्यतया ब्रेन ट्यूमरलाई तीन भागमा विभाजन गरिएको छ । त्यसलाई टि एन एम क्लासिफिकेसन भन्छौ । ब्रने ट्यूमरको एउटा विशेषता भनेको त्यो अरु ट्यूमर जस्तो बाहिर फैलिदैन र त्यसले लिफ्नोटलाई समात्दैन । त्यसले गर्दा त्यसलाई वर्गिकरण गर्न सकिदैन । तर यसको स्टेज हुन्छ । सामान्यतया हामीले यसलाई १,२,३,४ ग्रेडमा छुट्याएका हुन्छौं । ग्रेड बढ्दै जान्छ । त्यसै अनुसार ट्यूमरको स्टेज पनि बढ्दै जान्छ । ग्रेड १, २ भनेको लो ग्रेड वा बेनाइन टेयूमर भयो । उपचार भए पनि नभए पनि उनीहरु ७–८ वर्ष बाँच्छन् । ग्रेड ३, ४ भनेको हाइग्रेड वा बेलिगनेन्ट (क्यान्सर) भयो । ग्रेड ३ वर्ष जति बाँच्छन् । तर ग्रेड ४ जसलाई हामी ग्लायोबलास्टोमा भन्छौ । जुन सबैभन्दा कमन ब्रेन क्यान्सर हो । त्यसको जीवनकाल उपचार नगरे ६ देखि ९ महिना र उपचार गरे एक–डेढ वर्ष जति मात्रै हो । त्यसपछि उनीहरु खासै बाच्न सक्दैनन् ।
६) नेपालमा ब्रेन ट्यूमर रोगको अवस्था कस्तो छ ?
ब्रेन ट्यूमरको नेपालमा कुनै तथ्याङ्ग छैन । क्यान्सर भनेर रजिष्टर छ । तर ब्रेन ट्युमर यति नै छ भन्ने कुनै तथ्याँक छैन । ब्रेन ट्यूमरको तथ्याँक सरकारले पनि राखेको छ्रैन ।
७) नेपालमा ब्रेन ट्यूमरको उपचार सम्भव छ ?
अहिले नेपालमा पनि ब्रेन ट्यूमरको उपचार भइरहेको छ । टेक्नोलोजिले गर्दा अमेरिका वा अन्य देशमा भएका उपकरणहरु नेपालमा पनि आइसकेका छन् । हाम्रो देशमा पनि न्यूरोलोजिस्ट वा न्यूरो सर्जनहरु छन् । जसले नेपालमै ब्रेन ट्यूमरको राम्रो शल्यक्रिया गर्न सक्षम छन् । त्यसै अनुसारको टेक्नोलोजि पनि छ । न्यूरो सर्जनहरु पनि बाहिरबाट हाइली ट्रेन छन् । वर्षौं वर्षको अनुभव पनि छ । त्यसले गर्दा पहिला जस्तो अवस्था छैन । ब्रेन ट्यूमरका बिरामीहरु अब बाहिर जानु पर्ने बाध्यकारी अवस्था छैन ।
८) नेपालमै उपचार सम्भव हुँदा पनि बाहिर गएर उपचार गराउनेको संख्यामा नघट्नुमा प्रचारको कमी कि डाक्टरहरु प्रति विश्वास नबढेको ?
एउटा त विश्वासको कमीले हो । तर अहिले त्यो अविश्वासमा हामीले विश्वास दिलाउन बिस्तारै सफल भएका छौं । तर प्रचार प्रसारले कसैलाई मानसिक रुपमा प्रभाव पार्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । हाम्रो तिर के छ भने कसैलाई केही समस्या पर्दा आफ्ना वा साथीभाइहरुलाई सोध्ने र उनीहरुले भने अनुसार गर्ने बानी छ । जसले गर्दा पनि ब्रेन ट्यूमरका बिरामी बाहिर जाने गरेका हुन् । त्यो एउटा संस्कार नै बनेको छ । अर्को भनेको मान्छेको आर्थिक सवलता र यहाँ उपचार हुन्छ भन्ने मानसकिता नभएकाले गर्दा हो । तर म भन्न चाहन्छु । अब हाम्रो देशमा पनि ब्रेन ट्यूमर र ब्रेन क्यान्सरको उपचार सम्भव छ ।
मैले पनि अमेरिकाबाट ब्रेन सम्बन्धी १० वर्षको स्पेशल ट्रेनिङ्ग लिएर आएको छु । मसंग ३ वर्ष काठमाण्डौका विभिन्न अस्पतालहरुमा काम गरेको राम्रो अनुभव छ । हाल तीन महिनादेखि म पर्साको नारायणी वयोधा अस्पतालमा वरिष्ठ न्यूरो सर्जनको रुपमा सेवा दिइरहेको छु । हाम्रो अस्पतालमा हाइली अपडेटेड लेटेष्ट ब्रेन माइक्रोस्कोप छ । आवश्यक इस्टुमेन्टहरु छन् । हामी कहाँ सिप र उपकरण दुवै छ र हामीले सफल उपचार गरिरहेका पनि छांै । यस बाहेक वीरगंजमा पनि ५ देखि ७ जनासम्म न्यूरो सर्जनहरु हुनुहुन्छ । जसले सेवा दिइरहनु भएको छ ।
९) ब्रेन ट्यूमरको उपचार कतिको खर्चिलो छ ? नेपाल सरकारले यसमा केही राहत दिएको छ कि ?
सरकारी अस्पतालमा केही कम पर्छ । तर यो खर्चिलो नै छ । पmेरि यसलाई हामीले पैसासंग तुलना नगरांै । यसमा अस्पतालले दिने सुविधा, न्यूरो सर्जन, र ट्यूमरको अवस्था, जटिलता र लाग्ने समय अनुसारको खर्च हुन्छ । तर पनि हामीले विरामीको आर्थिक अवस्था हेरेर केही छुटको व्यवस्था पनि गरेका छौ । बिहीवारको दिन मेरो ओपिडी सेवा निशुल्क हुन्छ ।
जहाँसम्म सरकारले दिने सुविधाको कुरा छ । त्यो ब्रेन ट्यूमर रोगमा छैन । सरकारले केही अस्पतालहरुलाई स्वास्थ्य बिमा अन्र्तगत एक लाखसम्मको सहुलियत दिएको छ । तर त्यस भित्र केके स्वास्थ्य सेवा लिन सकिन्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।
#डा अभिशेक चतुर्वेदी #बरिष्ठ न्यूरो सर्जन #नारायणी वयोधा अस्पताल #ब्रेन ट्युमर
सोमवार, कार्तिक ८, २०७८, ०१:१०:००